PANATOLA STUDIO- $110 p/n izinga lasebusika!!
I-Panatola Studio iyikhaya lakho elibukekayo elikude nekhaya. Ihlala iyindawo eqashisayo yeholide enconywa kakhulu e-Bermuda enhle!
Itholakala endaweni efiselekayo yaseSouthampton enombono omangalisayo! Itholakala kalula ngaphakathi kwebanga lokuhamba ukuya ebhishi laseHorseshoe Bay, i-lighthouse, inkundla yegalofu kanye nezindawo zokudlela ezinhle.
Ifakwe ngokugcwele ngazo zonke izinsiza ozidingayo ukuze uthole iholidi lokuphumula. Ishaja yemoto encane kagesi iyatholakala!
Itholakala egqumeni enokubukwa okumangazayo kwe-Jews Bay kanye ne-Great Sound. Isitudiyo siyingxenye yendlu enkulu enomnyango ohlukile.
Lesi situdiyo sifakwe kahle ngombhede olingana nendlovukazi evulekile, isihlalo sothando kanye netafula lokudlela. Kukhona ezinye izinsiza ezihlanganisa i-TV eyisicaba enokubona ngekhebula, iDVD, ne-Wifi. Ukuze ukhululeke kukhona isifudumezi, isimo somoya kanye nesiphephetha-moya sosilingi. Ayikho imishini yokuwasha kodwa ezivakashini ezihlala izinsuku ezingaphezu kwezingu-3 sinikeza isevisi yokuwasha ngemali encane. Izinsiza zokugeza ziyishawa, usinki kanye nendlu yangasese. Ngaphakathi kwekhabethe kukhona konke okunye ongase ukudinge okufana nensimbi, isomisi sezinwele, amathawula, insipho, izihlalo zasolwandle, isambulela (sicela ubabuze uma kudingeka) namathawula olwandle.
Ikhishi lihlome ngokuphelele nge-china nezingilazi kanye ne-toaster, iketela, i-French press maker, i-microwave oven, isitofu sikagesi nesiqandisi esinefriji. Kunezindawo zokuhlala ezi-2 ngaphandle ukuze ujabulele ukubuka ngenkathi uphuza.
4.95 ·268 okushiwo abanye
4.95 · 268 okushiwo abanye
Indawo ephephile kakhulu.
Indawo yaseSouthampton ithathwa njengenketho ekhangayo ezivakashini ezibaziyo. Nakuba izindawo eziseduze kakhulu namabhishi aseNingizimu Shore zivame ukudingeka kakhulu, ubude bamakhilomitha angu-22 esiqhingini nobubanzi baso obungaphansi kwemayela ezindaweni eziningi kusho ukuthi ukufinyelela kulawo mabhishi kulula ngebhasi. noma nge-moped futhi lokho kungemva kokuba usuthole amabhishi amahle endaweni eseduze.
Uzoba nenjabulo yokuhlola amabhishi amangalisayo ngasogwini oluseningizimu: IChurch Bay emangalisayo inikezela ngamathuba amahle okushushuluza emanzini aseNingizimu Shore kanye namabhishi aphinki, agcwele amagobolondo ukuze uwahlole (awaziwayo njengeHorseshoe Bay neWarwick Long Bay ayaziwa, kodwa ngeke ufune ukuphuthelwa i-trio emangalisayo yama-cove ayimfihlo abekwe phakathi kwalawo mabhishi amabili amakhulu- i-Chaplin Bay, i-Stonehole Bay ne-Jobson's Cove. Lawa magama amathathu angamagama okugcina esihlabathini esibomvana sothando kanye nokuntweza okuthambile endaweni eyimfihlo eyimfihlo. eqashwe eChurch Bay kanye namabhishi amaningana amakhulu njengeHorseshoe).
Uzoba lapha ukuze akubingelele futhi akusize nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo.